प्राकृतिक रुपमा परिवार नियोजन गर्ने चार तरिकाहरु यस्ता छन् ! जानी राखौ – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ माघ २३, बिहीबार २२:१५
डा. सुबोधकुमार पोखरेल । प्राकृतिक परिवार नियोजनको पनि विधि हुन्छन् भन्ने सुनेको छु । प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि भनेको के हो ? यो कसरी गरिन्छ ?
मानिसले हजारौँ वर्षदेखि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्दै आएका छन् । आज हामीसँग धेरै सुरक्षित र प्रभावकारी परिवार नियोजनका साधन छन् । हरेक साधनका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् । तर, परिवार नियोजनका सबै साधनबारे राम्रो ज्ञान राख्ने हो भने आफूलाई सुहाउँदो साधन छनोट गर्न सजिलो हुन्छ ।
परिवार नियोजनका साधनलाई मुख्यतः दुई भागमा बाँडिएको छ, प्राकृतिक परिवार नियोजन र कृत्रिम परिवार नियोजनका साधन ।
पात्रो विधि प्रयोग गर्नुअघि महिलालाई आफ्नो पछिल्लो छ महिनाको महिनावारीको विस्तृत विवरण थाहा हुनुपर्छ । हरेक महिना महिनावारी सुरु भएको दिनको अन्तराललाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसपछि सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा छोटो महिनावारीको अन्तराल पत्ता लगाउनुपर्छ । र, सबैभन्दा छोटो अन्तरालबाट २१ दिन घटाउनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि छ महिनामा सबैभन्दा छोटो अन्तराल २७ दिनको छ भने यसबाट २१ दिनबाट घटाउँदा ६ दिन आउँछ । यो भनेको महिनावारी सुरु भएपछिको छैटौँ दिन हो भनी बुझ्नुपर्छ । अब महिनावारीको सबैभन्दा लामो अन्तरालबाट ११ दिन घटाउनुस् । उदाहरणका लागि महिनावारीको सबैभन्दा लामो अन्तराल ३१ दिन थियो भने यसबाट ११ दिन घटाउँदा २० दिन हुन आउँछ ।
यस विधिमा योनिबाट निस्कने सेतो पानीको महिनाको दिनअनुसार फरक हुने विशेषतालाई प्रयोग गरिन्छ । महिनाभरि महिलाको योनिबाट निस्कने सेतो पानीको विशेषता फरक हुन्छ । महिलामा हुने हार्मोनहरूको अस्थिरताले यस्तो हुन्छ । रसको प्रकारअनुसार महिलामा डिम्ब बन्ने समय पत्ता लगाउन सकिन्छ । डिम्ब बन्नुभन्दा अघि योनि रस पारदर्शी, पानीजस्तो, पहेँलो, धेरै मात्रामा हुन्छ । डिम्ब बनेको समयमा यो बाक्लो, गिलो र धागोजस्तो हुन्छ ।
डिम्ब बनेको समयपछि यसको मात्रा घट्छ, बाक्लो हुन्छ, चिपचिपे हुन्छ । डिम्ब बन्नुअघि रस पारदर्शी र पानीजस्तो हुने हुँदा पुरुषको वीर्यलाई पाठेघरमाथि आउन मद्दत गर्छ भने डिम्ब बनेको समयपछि रसको मात्रा घट्ने, बाक्लो र चिपचिपे हुने हुँदा यसले वीर्यलाई पाठेघरमाथि आउन रोक्छ ।